गफ ! .....: कविता : बुद्ध बोल्दैछ
Posted by दीपक जडित at 3:39 PM
दशैंले छाडेको शुन्यता मेटिएपछि .... lekhera tapaile sunya man bhanu bhaeko thiyo tar katiramro kabita lekhanu bhaeko ...
prasang ..r thalani nai
kati gajab6hajur
.......yasari nai kamal gardai jaanus hai jadit g ek pa6i arko gardai jod dai jaanus hai...yestai gari
जती डुब्यो त्यती डुबु जस्तो लाग्ने गरी सार्है गहिरो भाब बोकेको छ तपाईंको कबिताले दिपक जि ।
दशैँको रन्कोमा छिमेकतिर चियाउन सकेको थिइन । छिमेकतिर त धेरै धेरै कुरा भइसकेछ जस्तो लाग्यो मलाई । अनि दीपकजीको कविताको प्रसंशा गर्नु पनि बूता नपुगेको महशुश गरे मैले आफुलाई । अरु त के भनु र खोई ।
ए अँ त अनि ढिलै भए नि बधाई दिन्छु म दिपकजीलाई माइसंसारमा बिजेता कविताको कवि बन्नु भएकोमा । साँच्चै नै तपाई त्यसको लायक हुनुहुन्छ ।
धन्यवाद बेदनाथजी , दशैं आएर गएपछि साँच्चै नै एकप्रकारको खल्लोपना छोडेको थियो त्यो समयले मेरो मनमा त्यहाँ त्यसैलाई बिसाएको थिएँ ता कि त्यो शुन्यपनाको अन्त्य होस् ।
लुनाजी , वास्तवमै कवितामा डुबुल्कि मार्नुको मजै बेग्लै हुन्छ । चाहे लेख्दा होस् या अरुले लेखेको पढ्दा । धन्यवाद तपाईंलाई ।
कैलाशजी , तपाईँ फर्किनुभएछ कम्ता खुशी लागेको छैन । कुटीतिर तिहार लाग्दैहोला अब त , देउसी खेल्न आईन्छ है कुटीमा ।
yo padera malie maile dheri agadi lekheko kabita ko ek line yaad aayo.
"holaa katai ishwor pani prasaad grahan garna maatra"
kabita ko lagi dhanyabad
This isagreat blog. Brilliant.
Please let all the nepalis all over the world read it
म पनि दसैँ मनाएर आइपुगेँ है दीपक दाइ !! कविता मनपर्यो । कति लेख्न सक्नुहुन्छ हौ तपाईँ !! अचम्मै लाग्छ मलाई त ! फेरि जति लेख्यो उति राम्रा हुन्छन् !!
Wel come back उजेलीजी ,
अब सबैजना भेला भैसके झैं लागेको छ तर तिहारले फेरी अल्मल्याउने होला । धन्यवाद है मेरो कविताहरुको तारिफको लागी ।
निकै भावपूर्ण र दार्शनिक भाव बोकेको कविता रहेछ!
धन्यवाद वसन्तजी , सँधै तपाईंहरुको मनलाई यसरीनै छुन सके हुन्थ्यो कविताले ।
हजुरबाको एकलाईन मलाई पनि मनपर्यो , भगवान प्रसाद ग्रहण गर्नैलाई कतै होला भन्ने पुरै कविता कस्तो होला ? यो एक लाईनले चैं मान्छेले भगवानको भरोषा गरेर हार मानेपछिको अवस्था चित्रण गर्यो भने मैले चैं मान्छेले भगवान होलान् नहोलान् तर छन भनेर नौटँकी गर्दाको चित्र लेखेको हुँ । हजुरबाको कविता पढ्न पाए हुन्थ्यो नि ।
हजुरबासँग साथै यहाँ आउनुहुने सबैसँग माफी माग्नुपर्ने भयो है मैले । यो प्रतिक्रिया मैले केहि अगाडी माई संसारमै लेखेको दशैंको भेडा , भगवान र म मान्छे भन्ने कवितामा हो भन्ठानेर हजुरबाको कुरामा कुरा थपेको तर यहाँको स्थिती अलि फरक थियो है । यहाँ त मैले भगवान थिए तर हामीले पूजी पूजी मुर्ति भन्दा कठोर बनाएको अवस्थामा थिएनन् , भगवान पनि हामी झैं मान्छे थिए तर असल भन्ने कुराको चित्र लेखेको थिएँ ।